ZTE Axon 10 Pro 5G n'elu eserese AnTuTu ekele na nchekwa ngwa ngwa | Gam akporosis
Asọmpi maka ekwentị kachasị arụ ọrụ dị egwu, anyị nwere ike ịnwe onye mmeri ọhụụ n'oge na-adịghị anya, nke ga-abụ el ZTE Axon 10 Pro 5G, nke na-adịbeghị anya tozuru ọkwa na AnTuTu.
Ulo oru ZTE di n'etiti otutu igwe Snapdragon 855, ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọ bụghị chipset ahụ mere ka mmeri ya sie ike, mana nchekwa ahụ. Ka anyị lebakwuo anya n’ihe kpatara nke a!
AnTuTu ekwuola nke ahụ Axon 10 Pro 5G bụ ekwentị izizi jikọtara chipset S855 na sistemu faịlụ F2FS. Nke a mepụtara Samsung kpọmkwem maka iji nchekwa nchekwa, nke na-eme ya ngwa ngwa karịa sistemụ "ext4", nke ọtụtụ ekwentị gam akporo na-eji wee mee maka HDD.
Axon 10 Pro 5G nọ n'ọnọdụ mbụ maka nchekwa ya ngwa ngwa
N'ihi ihe ụfọdụ, Samsung rapaara na "ext4" faịlụ sistemụ maka Galaxy S10 usoro. na Pixel 3 jiri F2FS, mana nke ahụ bụ ekwentị dabere na Snapdragon 845. agbanyeghị, ndị Aha ya bụ Axon 10 Pro 5G ọ rụrụ 50% ka mma na akụkụ nchekwa nke benchmark karịa ekwentị ndị ọzọ SD855. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị sistemu faịlụ ahụ.
Ekwentị na-eji Sandisk iNAND 8521 ibe ya na 3-oyi akwa 64D NAND, featuring mma random na usoro n'usoro ide ihe. Ha nwere ike iru 500MB / s n'oge usoro ederede, mana ọsọ ọsọ AnTuTu tụrụ maka klas ekwentị a bụ 200-250MB / s.
Axon 10 Pro 5G dị ezigbo nso ịkpụcha ibe, na-eru 792 MB / s na 486 MB / s na usoro na-agụ ma na-ede, n’otu n’otu, yana 5,314 IOPS na 2,527 IOS n’agụ na ide ihe.
Ọhụrụ ibe na faịlụ sistemụ ngwaọrụ na-eji onwe ya arụpụta ihe kacha mma ederede na arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ZTE Axon 10 Pro 5G n'elu eserese AnTuTu ekele maka nchekwa ngwa ngwa
Vivo ekwentị ndị a niile ga-enweta beta bụ ọha nke Funtouch OS 9 na July